ngaphezulu ...Isilumkiso kunye nezitshixo
Iphepha elichazayo ukuba awusenanto oyifunayo
Ukuxela umxholo ongekho semthethweni kwiiforum: abuse@schagerer.com
Nceda ucaphule iikowuteshini kwaye uzithethelele ngendlela ye-layman ngokungqinelana ne-GBStGB §
1. Uxanduva lokuqulathwe kule webhusayithi
Sisoloko siphuhlisa imixholo yale webhusayithi kwaye sizama ukubonelela ngolwazi oluchanekileyo kunye nolwexesha. Ngelishwa, asinakuthatha naluphi na uxanduva ngokuchaneka kwayo yonke imixholo kule webhusayithi, ngakumbi leyo ibonelelwe ngabantu besithathu. Kwimixholo yeeforamu ezigciniweyo kunye namaphepha agciniweyo agcinwe ngumnini weforum lowo ungenguye uxanduva, oku kubonelela kuphela iqonga lobugcisa elikhoyo kwaye linoxanduva lokuya kuthi ga kwi-§16 ECG njengomnikezeli wokubamba ongekho kumalungu ayo nemisebenzi yawo. Ukuba uqaphela nawuphi na umxholo onengxaki okanye ongekho mthethweni, nceda uqhagamshelane nathi kwangoko, uya kufumana iinkcukacha zoqhakamshelwano kulolo.
2. Uxanduva lonxibelelwano kule webhusayithi
Iwebhusayithi yethu inezinto zonxibelelwano kwezinye iiwebhusayithi ezinomxholo esingazibophelelanga kuwo. Uxanduva lweiwebhusayithi ezidibeneyo azikho kuthi ngokwe-§ 17 ECG, kuba besingenalo ulwazi ngezinto ezingekho mthethweni kwaye singakhange sikubone okungekho semthethweni kwaye siyakususa amakhonkco ngokukhawuleza ukuba sisazi nakuphi na ukuchas 'umthetho. Ukuba uqaphela amakhonkco okungekho mthethweni kwiwebhusayithi yethu, nceda unxibelelane nathi, uya kufumana iinkcukacha zoqhakamshelwano ekutsaleni.
3. Ukugcina idatha ngokuzenzekelayo
Xa undwendwela iwebhusayithi namhlanje, ulwazi oluthile lwenziwe ngokuzenzekelayo kwaye lugcinwe, kubandakanya kule webhusayithi. Ukuba undwendwela iwebhusayithi yethu njengoko injalo ngoku, iseva yethu yewebhu (ikhompyuter apho le webhusayithi igcinwa khona) igcina ngokuzenzekelayo idatha enjengedilesi (URL) yewebhusayithi oyilindileyo, isikhangeli kunye nomkhangeli wesikhangeli, inkqubo yokusebenza esetyenzisiweyo, idilesi (URL) yondwendwelo lwangaphambili Iphepha (i-Referrer URL), igama lokubamba kunye nedilesi ye-IP yesixhobo apho ifikeleleka khona, kunye nomhla kunye nexesha kwiifayile (iifayile zeseva yeWebhu). Njengomthetho, iifayile zewebhu zokungena kwiwebhu zigcinwa kwiiveki ezimbini kwaye zisuswe ngokuzenzekelayo. Asiluchazi olu lwazi, kodwa asinakuyalela ukuba iya kubonakala kwimeko yokuziphatha okungekho mthethweni. Isiseko sezomthetho, ngokweNqaku le-6 isiqendu 1 f DSGVO (umthetho wokulungisa), kukuba kukho umdla osemthethweni wokuvumela ukusebenza ngaphandle kwempazamo kule webhusayithi ngokufaka iifayile zewebhu zewebhu.
4. Ukugcinwa kwedatha yobuqu
Iinkcukacha zobuqu osingenisa ngombane kule webhsayithi, ezinjengegama, idilesi ye-imeyile, idilesi okanye ezinye iinkcukacha zakho kwimeko yokuhambisa ifom okanye izimvo, ziya kwabelwane nathi kunye nexesha kunye nedilesi ye-IP. isetyenziselwe injongo echaziweyo, igcinwe ikhuselekile kwaye ingachazwanga kubantu besithathu. Sisebenzisa kuphela idatha yakho yobuqu ukunxibelelana neendwendwe ezicela ngokucacileyo unxibelelwano kunye nokulungiselela iinkonzo kunye neemveliso ezibonelelwe kule webhusayithi. Asizukuveza ulwazi lwakho lomntu ngaphandle kwemvume, kodwa asinakuyalela ukuba ibonakale kwimeko yokuziphatha okungekho mthethweni. Ukuba usithumela ulwazi lomntu nge-imeyile, kude nale webhusayithi, asinakuqinisekisa ukuhanjiswa okukhuselekileyo kunye nokukhusela idatha yakho. Sicebisa ukuba ungaze uthumele ulwazi oluyimfihlo nge-imeyile. Isiseko sezomthetho phantsi kweNqaku 6 (1a) le-GDPR (umthetho wokulungisa) kukuba usinika imvume yokuqhubekeka kwedatha oyingenisayo. Ungayirhoxisa le mvume nangaliphi na ixesha, i-imeyile engekho sesikweni yanele, uya kufumana iinkcukacha zethu zoqhakamshelwano.
5. Amalungelo ngokweMigaqo yokuKhuselwa kweDatha ngokubanzi
Ngokommiselo we-GDPR kunye noMthetho woKhuseleko lweDatha wase-Austrian (DSG), banamalungelo alandelayo kumgaqo: ilungelo lokulungiswa (iNqaku le-16 GDPR), ilungelo lokucinywa (iNqaku le-17 GDPR), ilungelo lokuthintelwa kokusebenza (Inqaku. I-18 DSGVO), ilungelo lesaziso, umsebenzi wesaziso ngokunxulumene nokulungiswa okanye ukucinywa kweenkcukacha zobuqu okanye ukunqunyulwa kwenkqubo (iNqaku le-19 GDPR), ilungelo lokuphatheka kwedatha (iNqaku lama-20 GDPR), ilungelo lokuchasa (iNqaku lama-21 GDPR), kunene, hayi okodwa ukufakwa kwisigqibo esisekwe kulungiso oluzenzekelayo, kubandakanya ukufaka ingxelo, (iNqaku lama-22 GDPR). Ukuba uyakholelwa ekubeni ukuqhubekiswa kwedatha yakho kwaphula umthetho wokhuselo lwedatha okanye ngenye indlela amabango akho okhuseleko wedatha aphulwe ngendlela, unokukhalaza kwabaphetheyo, apho e-Austria ligunya lokhuselo lwedatha.
Iwebhusayithi yethu isebenzisa iicookies zeHTTP ukugcina idatha ekhethekileyo yomsebenzisi. Icookie yipakethi yedatha emfutshane ethe yatshintshwa phakathi kwesikhangeli sewebhu kunye neseva yewebhu, kodwa ayinantsingiselo kubo kwaye isetyenziselwa usetyenziso lwewebhu kuphela, njengesicelo sewebhu. Njengeforamu, intsingiselo, umzekelo, ngokugcina okwethutyana idatha yeseshoni yeakhawunti yomsebenzisi ongene kuyo kwiforum. Zimbini iintlobo zicookies: Iikuki zomntu wokuqala zenziwe yiwebhusayithi yethu, kwaye ii-cookies zecandelo lesithathu zenziwa zezinye iiwebhusayithi (umz. Cloudflare). Umahluko ongakumbi wenziwa phakathi kwamacandelo amathathu eicookies, lo mmahluko usekwe kwimfuno yokusetyenziswa: ii-cookies eziyimfuneko ukuqinisekisa imisebenzi esisiseko yewebhusayithi, ii-cookies ezisebenzayo ukuqinisekisa ukusebenza kwewebhusayithi kunye neicookies ezichongiweyo ukuphucula amava omsebenzisi. Iikuki zethu zomntu wokuqala ziyimfuneko ngobuchwephesha ukuqinisekisa ukusebenza kweenkonzo kwaye azinalo naluphi na ulwazi lobuqu njengedilesi ye-IP okanye idilesi ye-imeyile. Iicookies zethu ke ziphantsi komthetho § 96 we-Telecommunication Act (TKG), kuba inkonzo ayizukubasebenzela bonke abasebenzisi xa iicookies zikhubazekile. Imvume ngaphakathi kwentsingiselo ye-TKG ayimfuneko. Ngokukodwa, ezi kuki zecandelo lokuqala: * _data, * _t, * _sid kwaye ngokokuzikhethela xt_ddos_key, xt_fboff kunye xt_banman njenge cookies zeseshini yokungena kunye nedatha yeseshoni, xt_cdn, xt_dir kunye ne-xt_rewrites ukukuhambisa kwakhona ukufikelela kwi-Cloudflare , kunye xt_cookiecheck ukwenza ukuba wazi ngenqaku elikufuphi nemaski yokungena, ukuba ukhubazekile ii-cookies kulungiselelo lwakho lokukhangela. Icookie yecomputer yesithathu yidokey cookie eyimfuneko evela eCloudflare. Sisebenzisa iinkonzo ze-Cloudflare ukukhusela iinkonzo zethu ekuhlaselweni kwe-DDoS, ngaphandle koko ukubakho kwayo bekungayi kuqinisekiswa. Iicookies zihlala zigcinwe kwisixhobo sakho de kuphele ixesha lokusebenza okanye de ube uzicimile, ezinokwenzeka kuxhomekeke kuseto lwesikhangeli sakho xa uvala isikhangeli sakho. Ukuba ngokubanzi awusivumeli ukuba sisebenzise ikuki, i. khubaza oku kuseto lwebrawuza, eminye imisebenzi kunye namaphepha azikwazi ukusebenza njengoko bekulindelwe.
7. Sebenzisa Imigaqo yokuSebenzisa